Black Swan iyo Subagga Lawska iyo Jelly Sandwiches | Martech Zone
Black Swan iyo looska Subagga iyo Jelly Sandwiches
Axad, Disembar 2, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dhowr usbuuc ka hor waxaan adeegsaday adeeg si aan ugu sameeyo falanqeyn ku saabsan balooggeyga si aan u arko heerka akhris ee ay ku qornayd. Waxaan la yara yaabay in goobta ay ku taalo heer Dugsi Sare. Sida akhristaha jecel iyo blogger, waa inaan ka fiicnaadaa Junior High School, miyaanay ahayn? Aniga oo siinaya xoogaa fikir ah, ma hubo inaan haysto wax aan ka xishoodo.
Sida Loo Sameeyo Subagga Lawska iyo Jelly Sandwich
Mid ka mid ah macallimiintii aan ugu jeclaa Ingiriiska ayaa fasalkeenna hal mar ku furay layli qoraal ah, Sida loo sameeyo Subagga looska iyo Jelly Sandwich. Waxaan haysanay 30 daqiiqo oo wanaagsan oo aan kuqorno tilmaamaha, maalintii xigtayna, way naga yaabisay iyadoo noo keentay weel sabdo laws, jelly, rooti, ​​iyo mindi subagga.
Professor-kayaga wanaagsan wuxuu markaa bilaabay inuu raaco tilmaamaha oo sameeyo sandwiches. Wax soo saarkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa musiibo tilmaamaha kooban sida ugu sharraxaad badan. Waxaa laga yaabaa in kuwa ugu qosolka badnaa ay ahaayeen kuwa aan weligood xusin isticmaalka mindi gabi ahaanba. Waxay ahayd fasalkii ugu horreeyay ee Ingiriis ah oo aan qaato oo aan la baxo anigoo calool xanuun ka qaba qosolka dartiis. Muhiimadda casharka ayaa igu dhegtay, in kastoo.
Weedho gaagaaban, sharraxaad kooban, ereyo fudud iyo qoraallo gaagaaban ayaa kuu horseedi kara heerka Akhriska Dugsiga Sare, laakiin sidoo kale waxay u fureysaa balooggaaga (ama buuggaaga) dhagaystayaal aad u ballaadhan oo fahmi doona macluumaadka. Waxaan u maleynayaa haddii aan hadaf u lahaa heerka akhriska ee boggeyga, waa waxay noqon laheyd dugsiga sare ee yar yar! Haddii aan u sharixi karo tikniyoolajiyadda aan la shaqeeyo qof jira 15 sano, markaa qof 40 jir ah hubaal wuu daadin karaa!
Black Swan waxaa qoray Nassim Nicholas Taleb
Dabeecaddan awgeed ayaan ku furayaa buug sida Black Swan mana mari karo 50-ka bog ee ugu horeeya bil akhris. Sida mid Dhaleeceynta Amazon dhig:
[Marka laga reebo cutubyada 15 illaa 17]… Inta ka hartay buugga waa niyad jab. Boqolaal bog ayaa lagu soo koobi karaa iyadoo la sheegayo inaanan saadaalin karin dhacdooyinka dhifka ah.
Haye! Allaa mahad leh kaligay ma ihi! Buuggan wuxuu ahaa mid xanuun badan. Layaab ma leh sababta ay dadyowgu u qadariyaan baloogyada aad u maalmahan. Ma isku dayayo inaan qoro a New York Times iibiyaha ugu fiican sidoo kale iskuma dayo inaan cajab galiyo Ivy-leaguer. Waxaan kaliya isku dayayaa inaan u sharaxo waxyaabahan sida ugu fudud ee aan awoodo si aan ula wadaago oo aad u fahanto.
Erayada aan u adeegsan karo inaan ku sharaxo Swan Madow: qarxis, sheeko, faafid, faafid, hadal badnaan, gabby, garrulous, buuqsan, dherer, dabayl dheer, xarago leh, xarago leh, layaab leh, prolix, cuncun, badnaan, hadal badnaan, caajis, turguid, hadal, mug leh, dabayl leh. (Mahadsanid) Thesaurus.com)
Haduu Taleb qori lahaa Sida loo sameeyo Subagga looska iyo Jelly Sandwich, barafasoorkaygu wali wuu ka shaqeyn karaa - waana shaki la'aan inay u egtahay sandwich gabi ahaanba.
Taasi waxay tiri, waan soo laaban doonaa oo waxaan qaadan doonaa talabixiyaha dhaliisha iyo aqrinta Cutubyada 15 ilaa 17. Marka la eego falanqaynta heerka aqrinta, fiiro gaar ah ha siin… hal cutub oo laga soo qaatay thesaurus ayaa kugu soo koobi kara adiga darajo sare. 😉
Tags: buuga suuq geyntanassim talebswan madow
Dhiigga Blogger ee Dhiig-baxa sida Faafidda Xogta Khaldan ee SEO
3, 2007 at 8: 24 AM
Xaqiiqdii, sida ay qabaan khabiirada qorista, sameynta "sifiican" waxay ku qori lahayd xitaa heer fasal hoose. Celceliska heerka aqrinta ee dalkan waa fasalka 6-aad, joornaalada oo dhanna waxaa lagu qoraa heerkaas. Qorayaasha Isgaarsiinta Suuqgeynta Wanaagsan waxay sidoo kale wax ku qori doonaan heerkan, halkii ay ka qori lahaayeen heer sare. Waxay ka dhigeysaa koobi-kooda mid aad u fudud in la akhriyo lana fahmo, sidaa darteed waxay jareysaa dhammaan isku-buuqa nolosheena, sidaas darteed, waxay u badan tahay in la qanciyo. (Iyaguna ma dhahaan “sidaasna waa.”)
Waxaan sidoo kale aqrinayay Black Swan, waana XANUUN. Waxaan jeclaan lahaa inaad boggan soo dhigto qiyaastii shan cutub ka hor oo aad iga badbaadisay jirdilkan.
3, 2007 at 9: 50 AM
Ku ducee, Doug, iyo faallooyinkaaga ku saabsan qaadashadaada Swan Black. Waxay igu leedahay saameyn isku mid ah sida a Seconals coupla – 10 daqiiqo oo aan la socdo buugga oo aan ka baxay. Xalay waxaan seexday 8:45!
Wiilkaaga Nassim waa midka aan ugu yeero SAKIA – smart dame know-it-all. Wuxuu sidoo kale waafaqayaa qeexitaankeyga shaqo ee ah shaqsiyad sare - midka waxbarashadiisu ka sarreyso caqligiisa. Qofbaa ubaahan inuu bitchslap this punk smarmy -kaga tago $ 100 talooyin ku saabsan cabbiyeyaasha.
Sida soo kabashada econ weyn, waxaan magac u lahaan jirnay Black Swans. Waxaan ugu magacdarnay "dhacdooyin qariib ah", waxayna si isdaba joog ah u burburiyeen dhammaan aragtiyaheena saadaasha wanaagsan. Econ majors waxay leeyihiin faham badan oo plebian ah oo ku saabsan waxyaalahan - dhacdooyinka aan la saadaalin karin lama saadaalin karo.
3, 2007 at 9: 51 AM
Sida Derek uu uga hadlay wargeysyada IWM, waxaan ku aqriyay meel (caan caan ku ah ereyada lasiiyo :) in WAKHTIGU u toogto heerka aqrinta fasalka 6aad-7aad markii la qorayo sheekooyinkooda si ay ugu fududaato dadka oo dhan inay wax akhriyaan.
Qaar ka mid ah qoraalladii ugu fiicnaa ee aan ku akhriyo baloogyo kala duwan ayaa ah weedho gaagaaban oo macno leh, waxaan u malaynayaa Seth Godin inuu yahay sayidkan.
4, 2007 at 4: 59 AM
Waxaan sidoo kale helay "Junior High"
Sideen ku ogaan karaa inay goobta shaqeyso? Ma jiraa baloog caan ku ah akhris adag?
12, 2007 at 1: 46 AM
waxaan qabaa Black Swan waxaa laga yaabaa inay ku habboon tahay suuqleyda sababta oo ah fahamkeeda halista dhabta ah ee aan hadda wajaheyno suuqa maanta. Buuggan, waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan awoodda iyo xakamaynta in ka badan meel kasta oo kale. Awoodda iyo xakamaynta waxay helayaan dharbaaxo xun - ka dib oo dhan, suuqleyda ayaa dadka qanciya maalin kasta oo kuwani waa laba sifo oo qurux badan oo qancin leh? Waxaan filayaa.
Ma ahan aqris fudud laakiin waan kula talin lahaa kan go'aan qaadayaasha noocyadooda kala duwan.